Been Sheeg oo Been Run u Egg Sheeg – Rasaasa News
Nov 17, 2009 Jwxo-shiil, ONLF
“650 ciidan Itobiyaan ah ayey ONLF dagaal ku dishay, 7 saldhig oo ay lee yihiin ciidamada Itobiya ayey cagta marisay oo ay qabsatay ONLF, boqolaal dhaawac ah oo Itobiyaan ah ayey ONLF saldhigyadeeda ku daawaynaysaa, maydadka ciidamada Itobiyaanka ah ayaa karooran magaalooyinka ay ONLF qabsatay kuwaas oo shacabka ku keeni doona caafimaad xumo. Dagaalada ayaa ilaa iyo hada socda toban maalmood gudahoodna dalka oo dhan ayey ONLF kaga xoreyn ciidamada gumaysiga Itobiya”.
Jumladahani waxaa ay ku jiraan war saxaafadeed uu soo saaray dambiile Jwxo-shiil, oo sida aan la socono shiilay xoogaagii ka hadhay ururkii ONLF, ee ku dhuumaalaysanayey gudaha ogadeeniya.
Madax gaabnida agg joog joogta iyo eheladiisa waxayna waligood fahmi doonin beenta iyo khaa,inimada uu la aamusan yahay ee ka buuxda Jwxo-shiil, waxaanse fili in haatan wixii ka dambeeya ay si waafi ah u fahmi doonaan wax uu yahay Jwxo-shiil.
Waxaan cidna loo sheegaynin oo aan la qarin karin todoba magaalo oo ay ciidamo xoog ku qabsadeen, oo ay ku dhinteen tiro dad ah oo gaadhaysa 650 askari, dagaalka loogu magac daro [war] oo ah dagaal ay ka qayb qaataan ciidamo lug ah, gawaadhida dagaalka iyo diyaaradaha dagaalka ayeyna suurto gal ahayn in muddo labo maalmood ah ay ku dhintaan 650 ruux, saa waaba afar jabhad ah. Arintaas waxay noqon kartaa oo kaliya adiga oo fiirsada Filim dagaal [full scale war] dabadeedna uga sheekeeya dadka oo qiyaasa inta ku dhimatay.
7 Magaalo ayey qabsatay ONLF, oo ay wali haysataa awooda intaas la egg hadii ay leedahay oo ay ku qabsan karto magaalooyin intaas la egg, waxaan hubaa in dhulka oo dhan ay waa hore xorayn lahayd ONLF. Kol waxaan maqlay waa 7 saldhig, kola waxaan maqlay waa 7 magaalo, kolkii loo kuur galayna meelaha ay magacooda uu Jwxo-shiil soo qoray waa qari cidla ah oo aan waligeed saldhig ciidan daayo aan buul caws laga dhisin. Waxaana u qaatay sheekada uu Jwxo-shiil fidiyey beentiisii iyo Paltalk.
Waxaa kale oo aad iiga yaabiyey in saldhigyada ONLF, lagu hayo maxaabiis ciidamo Itobiyan ah oo lagu qabtay dagaaladii ka dhacay 7 saldhig ee uu Jwxo-shiil sheegay in uu Itobiya ka qabsaday, kuwaas oo ay tiradoodu gaadhayso 500 00 askari oo la daaweynayo dhaawacooda, kuwii raban loo gudbin doono dhulka Oromada. Ilaahay amarkiisu badanaa daawooyinka iyo saldhigyada ONLF soo kuwo la arko ma aha ma jin baa.
Arinta kale ee iyana la yaabka leh ayaa waxay tahay, tirada Maydadka qudhmay ee askarta Itobiya ayaa waxay caafimaad xumo ku keeni karaan dadka degan magaalooyinka, waxaana laga rabaa hayyadaha caalamiga ah ay ka qayb qaataan aaskooda. Awooda dishay intaas oo dad ah u malayn maayo in ay waayi awood ay ku aasto mayka ay dishay.
Waxaan u malaynayaa ruuxii akhriya war saxaafadeedka ku dhagan bogga Jwxo-shiil, ee Ogaden.com in uusan waligii oo dambe dhaysan doonin wax uu sheegay Jwxo-shiil, ruuxa qoray iyo ka soo dhajiyey labadooduba waxaan hubaa in ayna ahayn kuwo la socda xaqiiqda ka jirta dhulka Somalida Ogadeeniya.
Hadiiba ay balanqaadkaas 10 ka maalmood ah samaysay ONLF, maxay intaas oo sano noo hagranaysay oo ay dhibaatada ugu daawanaysay dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Ruuxna korkiis biyo kama hagrado!
Hadaba, dhabta jirta ayaa waxay tahay in saddex magaalo oo ay joogaan ciidamada booliska degaanka oo kaliya uu Jwxo-shiil, oo lahaa ujeedo gaar ah ugu amray xoogaa ciidan ONLF ah in ay laayaan booliska, nasiib daraso iyaga ayaa la laayey oo ay dhibaato xumi soo gaadhay, masuuliyadeedana waxaa leh Jwxo-shiil.